トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Faran'ny volana, tara ny pachinko efitrano fandraisam-bahinin'ny ny endri-javatra (na fe-potoana famerenana-misokatra amin'ny fiainana)
※ no fotsiny ny faran'ny
pachinko efi-trano Mba antsointsika hoe ny fironana ho an'ny orinasa iray manontolo, araka ny eritreritro dia ny olona sasany izay efa nandre ny tsaho izay tsy nivoaka. Raha ny marina, marina izany. Ny faran'ny pachinko efi-trano dia, ao amin'ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana, azafady mihevitra fa ny fotoana fanarenana. Nanatrika ny raharaham-barotra drafitra mazava, dia nanao ny andro farany fanitsiana. (Izany dia raha Atsimbadiho ny lafiny izany, raha tsy manao be avy baolina famoahana niakatra ho any amin'ity indray mitoraka ity, dia misy ihany koa ny raharaha tokony hahena.) _ X000D_ toy ny
Xintai fanoloana sy ny dokam-barotra ny fandaniana izay ny hetsika natao dia, toy ny lany hatrany am-piandohana ny volana ny vola efa tapa-kevitra.
Xintai fanoloana tompon'andraikitra ihany koa ny faran'ny volana, satria lany ny tamin'ny fiandohan'ny volana, dia izay vola tsy maintsy ho avy sitrana lasa ilaina. Raha mandeha araka ny drafitra, dia tsy dia mila ho be indray aza faran'ny volana, zavatra pachinko zavatra na dia toy ny filokana, izay misokatra. Raha nijery ny
angona, ny sehatra ny payout ny fikorianan'ny sy ny mpamokatra ny endri-javatra, any amin'ny farany, izay mitohy amin'ny zavatra niainany manokana, sns, namely ny fantsika, satria isika no hamaritra ny napetraka, mazava ho azy, avy amin'ny tsy ampoizina na ny lasa, ny zava-misy izay or've dia naka ny tena matetika eo amin'izao tontolo izao.
pachinko In Koa efi-trano, fa ny farany ny fandidiana fanitsiana ny tombom-barotra, avy any amin'ny faha-20 ny isam-bolana, nanomboka mafy ny fantsika, na ny fampidinana ny toe-javatra ny Horukon, miditra ny famerenana ny rafitra. Raha niresaka ny antony tamin'ity indray mitoraka ity, dia ny 25 isam-bolana eo amin'ny ankapobeny, dia ho Hijery. Raha misy karama, raha tsy avy, ny mpividy ahy hanenjika ny fandresena noho ny mahazatra. Mihoatra noho ny tamin'ny voalohany ny volana na ny tapaky ny volana, dia azo inoana fa ho ahy ny vola.
Ankoatra izany, ny zava-misy fa manenjika ahy dia somary be noho ny mahazatra, na dia ny fepetra hentitra ny fantsika sy ny toe-javatra, ny varotra no izy, dia ho afaka manangana ny tombom-barotra lehibe. Andro vitsy ny 25 andro koa ny Hall, fivarotana tsy misy ihany koa ny namoaka hiezaka koa hatsangana ihany koa ny soa lehibe, dia lasa ny zava-misy fa nandritra ny mahazo ny tena koa ao anatin'ny iray volana.
Hatraiza Fa ny zava-misy na ny famerenana ny fotoana, ka tonga anjara ao amin'ny fahatarana amin'ny fandraharahana drafitry ny tranombarotra tsirairay, dia aza milaza categorically, raha efa nandray be haingana toy aoriana avy amin'ny drafitry tombony lehibe, ny famerenana koa ny sakany, dia mazava ho azy mitombo.
ny faran'ny volana, fantsika fanitsiana sy ny toe-javatra ihany koa, raha miandry ela loatra ary tsy dia indray andro, dia tombony lehibe eny an-dalana tanjona dia tsy ho tanteraka intsony naka. Amin'ny zava-dehibe ny fandidiana ny pachinko drafitry ny efi-trano dia izao tontolo izao izay varotra, amin'ny roa lafo vidy lehibe napetraka ny tombom-barotra.
izany fanitsiana fantsika, ihany koa dia midika fa mametraka ny napetraka, raha oharina amin'ny fiandohan'ny volana na ny tapaky ny volana, dia ny sakan'ny ny tsy ampoizina lasa kely faran'ny volana mba havela. Na kely, mba reliably sitrana, dia ny miezaka ny tsy fahombiazana tsy misy fanitsiana ihany, ianao toe-javatra ara-tsaina ny faran'ny ny lafiny fitantanana.
fotsiny satria, ho tonga ny rehetra hijoro ao amin 'ny toe-javatra, no tsy mety ny mampanatitra fotoana. Ho mafy ihany fanitsiana vitsivitsy feo tokana ny payout tsara loatra. Latabatra izay eo ny ara-dal?na sy ny fanitsiana fantsika Horukon koa teo, dia misy tsara. Ankoatra izany, slot, sns, mba ho mora ihany koa ny nametraka fiovana noho ny fantsika fanitsiana, mahatonga azy ho mora ho andrasana ny baolina avy oharina amin'ny pachinko.
ny faran'ny ny slot, raha ampitahaina amin 'ny pachinko, ao amin'ny lalao, tsy mahazo ny fanampiana fa hoy Izy ho disadvantageous toe-javatra. Ny faran 'ny volana mba tsy hanadino ny zava-misy fa fe-potoana ny famerenana, mba handinika ny tanjona faladiany, dia tsara kokoa ny hilalao tsy misy manenjika be loatra koa ny hira. Izany no sakan'ny lasa kely tsy ampoizina faran'ny volana ho. Na kely, mba reliably sitrana, dia ny miezaka ny tsy fahombiazana tsy misy fanitsiana ihany, ianao toe-javatra ara-tsaina ny faran'ny ny lafiny fitantanana.
ny faran'ny ny slot, raha ampitahaina amin 'ny pachinko, ao amin'ny lalao, tsy mahazo ny fanampiana fa hoy Izy ho disadvantageous toe-javatra. Ny faran 'ny volana mba tsy hanadino ny zava-misy fa fe-potoana ny famerenana, mba handinika ny tanjona faladiany, dia tsara kokoa ny hilalao tsy misy manenjika be loatra koa ny hira.